प्रधानमन्त्री देउवा र पारस खड्काबीच भेट — Sanchar Kendra
प्रधानमन्त्री देउवा र पारस खड्काबीच भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्कासँग भेट गरेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेट प्रधानमन्त्री देउवाले क्रिकेटको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
देउवाले दुई दशमा नेपाली क्रिकेटले हासिल गरेका हरेक सफलता नेपालीले कहिल्यै नभुल्ने भन्दै ती रोमाञ्चक जीत र क्रिकेटमा झन् ठूलो सपना देख्न प्रेरित गरेकामा पारसलाई धन्यवाद दिएका छन् । देउवाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाल र नेपालीको शीर उचो बनाउन जिन्दगीको दोस्रो इनिङमा पनि सफलता मिलोस् । सरकारको साथ र सहयोग सधैं रहनेछ ’
क्रिकेटर पारस खड्काले पनि क्रिकेटको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकामा प्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद दिएका छन् । गत वर्ष नेपाली टिमको कप्तानबाट राजीनामा दिएका पारसले अघिल्लो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण तय
साफ उपविजेता खेलाडीलाई ५ लाख दिने सरकारको निर्णय
सकियो माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक, के भए निर्णय ?
साफ उपविजेता नेपाली टिम स्वदेश फिर्ता
विप्लवसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्रीको तयारी
नेकपा एसमा कार्यविभाजन टुंगियो, कसलाई कुन जिम्मेवारी ?
माओवादी महासचिव मोहन वैद्य अस्पताल भर्ना, के छ अवस्था ?
थप ३९१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ६ को मृत्यु